Dhumaatii fi Dhabamuu irra Dandamachuuf « QEERROO
Dhumaatii fi Dhabamuu irra Dandamachuuf
November 5, 2016 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Waraana Wayaanee amma funyaa isa gahutti meeshaa baraan hidhatee jiru Qeerroon Bilisumaa Oromoo harka qullaa murannoo guutuun dura dhaabbatee sochoosuu dorkuudhaan injifannoo isa duraa uummata Oromoof galmeesse jira. Uummatni Oromoos waamicha ijoollee isaa fudhatee Oromiyaa guututti irree tokkoon ka’e, “lakki nu gahii nu irraa deemaa” jechuudhaan qabsoon bilisummaa akka dagaagu gargaareera. Mootummaan TPLF,” amman bakkatti isaan galsha “jettee dhaadachaa turte waan qabduu fi waan gadi dhiistu walaaltee ofii bakka galtu mala dhachuu eegalte.
Mala argatte keessaa tokko Labsii Hattattamaa labsuudhaan uummata Oromoo caalaatti hiraarsuu fi sodaachisuu yaaluu akka tahe agarree jirra. Innis akka ishee baasuu hin dandeenye bareechitee hubatti. Gochi kun hunda caalaa saaxxila ishee baasee akka qullaa dhaabbatu ishee godhee jira. Kan dura qabeenyi biyya sana baayyee gudachaa fi demookraasiin biyyaa sana keessatti hedduu dagaagaa jira jedhanii warri ishee faarsaa ture hunduu wajjin salphate. Beelli karaa tokkoon uummata fixxaa jira. Ishee aangoo irraa turuuf jechaa humna ishee dura dhaabbatu hundaa fixxuuf abbalaa jirti. Haalli kuun lubbuu ishee gabaabsaa jira malee aangoo irra kan ishee tursiisu miti. Ummatni Impayeera Itoopiyaa sana keessa jiruu hunduu ishee xireefatee irratti ka’aa jira.
Innis baasuu didnaan dhiyeenya kana ministra haaraa muuduudhaan waan jijjirama fiduu danda’u itti fakkaatee dhama’aa jirti.Gaaffiin uummata Oromoo ifaa dha.Jijjirama sirna kolonii barbaadaa jira malee jijjirama namootaa mootummaa TPLF ofan miti. Yaroo dhiphuu kana keessa namoota haaraa muuduun uummata mitii mootummaa sana iyyuu hin gargaaru. Warrii kun dafanii waan argatan saamatanii akka warra duraa sooromuuf yaroo gahaa waan hin qabneef hanna irratti boba’uu dhiisanii yaroo mootummaa isaan muudeef hojjetan hin qaban. Mootummaan kun akka lubbuu hin dheerannee argaa jiru. Kanaafuu gargarumaa tokko illee fiduuf hin danda’u.
TPLFiin gara owaala ishee isa dhumaatti gageessuu kan danda’u uummata Oromoo bal’aa fi uumatoota Impaayeera Itoopiyaa ti. Gootonni Qeerroon Bilisummaa Oromoo har’as jabbinaa fi gamnummaan haalla qabatamaa jiru xinxalanii akkaataa itti injifannoon diina kana irra aanan tilmaamuu qabu. Akka hubannaa koo yoo tahe qabsoo bilisummaaf goonu kana keessatti humna nu keessa taa’ee nu diiguu fi diinaaf hojjetu hubannaa gahaa waan kenineef natti hin fakkaatu. Waan hundaa caalaa diina keenya isa duraa kan taate TPLF irratti harka guddaa kan xiyyeefanne natti fakkata. Diina keenya duraa irratti xiyyeefachuun baayyee barbaachisaa dha. Haalli kun yoom iyyuu ija keenya jalaa daachuu hin qabu. Haa tahu malee diina keessaa dagachuun gaagama amma kana jedhamee himamuu hin dandeenye qabsoo kana irratti fiduu danda’a, fidaas jira. TPLFis tahe waraani ishee ilmaan Oromoo qaraa fi sab boontota tahan adda baasanii hin beekan. Mana isaanii, maqaa isaanii , abba isaanii fi haadha isaa tasa beekuuf ayyaana hin qaban.
Kan uummata keenya ficisiisaa jiru namoota nu keessa jiraatanii diinaaf hojjetaa jiran akka tahe eenyu jalaa iyyuu dhokkataa natti hin fakkaatu. Keessattu erga command postiin kun dhaabbate as ganda tokko irra namoota baayyee ajjeessamnii , namoonni dhiba baayyeen lakkawwan immoo akka hidhamanii fi akka bakka buuteen isaan dhabbaman namni hin dhageenye jira natti hin fakkatu. Oromotni command post jedhamu kana wajjin hojjetan hattattamaan dhabamsiisuun lubbuu ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkawwamnii baraaruu taha. Waraana keessatti lubbuu jaallewaan baayyee dandamachiisuuf jecha of aarsaa tahanii diina wal irraa qolachuun waanuma jiru. Erga uummanti Oromoo kumaatan kan kan gaagga’amu tahe tahee maaliif namni muraasni command post kana hin qulqulleessinu? Yaroo kanatti humna gahaa yoo hin qabannne humna Agaazii xuquunu hin barbaachisu. Kan shakkii tokko malee duraan dursee baduu qabu Oromota qabsoo bilisumaa uummata Oromoo guufuu tahaa jiran tahuu qaba.. Agaaziin karaa irra deemee beenzina gubee mootummaa kasarsiisa malee waan gadi fidu hin jiru.
Haalla kana akka barame jennee ilaaluun dhumaatii fi dhabamuu lubbuu baayyee akka fiduu dandau hubbannee fala itti barbaaduu qabna. Sabni dhala isaa hin abboomane tokko diina isaa injifatee nagaan jiraachuu rakkina qaba. Uummatni Oromoo bilisa bahee nagaan jiraachuuf duraan dursee ilaa fi ilaameen tahe humnaan waliif aboomamuu qaba. Yoo gareen tokko akkuma gabaan itti toletti fedhii uummata gurgurachuu fi itti daladaluuf ayyaana kan qabaatu yoo tahe warri kan maaliif dhiisa?
Warra diaspora jiran keessa hojii OPDO kana fudhachuuf warra wal saamaan keessa garee lama argaa jirra. Gareen tokko warra kana duraa mootummaa Itoopiyaa keessaa gahaa qabachaa turanii waan hundu harkaa babadee waanuma argamtan butachuuf warra cacabaa jiru dha. Warii kun wal galtee Habashaa wajjin uummuu miti TPLF wajjin yoo tahe rakkina tokko hin qaban amma gahaa isaanii waan xiqqoo argatanitti. Garuu walkaan isaanii yoo’ wheelchair’ dhufan malee deemanii dhufuu guyyaan irraa dumee jira. Gareen lammaffa umuriin gara warraa Qeerroo Bilisummaa Oromootti waan dhiyaatanii actvistoota ofiin jedhu.Yaroo Oromoo bira dhufan waa’ee cunqursaa fi mirga uummata Oromoo dhubbatu. Yaroo warra Habashaa bira deeman akkaataa Impaayeera Itoopiyaa itti dimookraaseen haasa’u. Warri kun waan wal mormuu kana oofaa bakka tokko gahu jennee waan sodannu hin qabu. Isaanuu humna lama jiddutti mecelequuf deemu. Warra duraa wajjin walii galuuf afaan walii iyuu hin beekan . Kana malee kajeeltuun lamaan wal hin jaalatu. Summiin namoota diaspora akka uummata keenya keessa seenee hundee hin godhanne qalbiin tuhachaa warra uummata keenya irra gaagama geesisaa jiru of keessaa qulqulleessuun hojii dursu tahuu qaba.
Uummatni Afrikaa Kibbaa basaastota warra atvistoota dabarsee horiin gurgurachaa ture ragaan erga qabatanii ajjeessuu dhiisanii ibdaan gubuu yaroo jalqaban kaan sodaate hojii basaastumaa irraa lagachuu filata. Yaroo sana mootummaan sanyi balfattuu Apartheid akka dhumee hubbattee aangoo gad lakkiste.
Amma Oromonni TPLFiif hojjetan jiranitti mootummaan TPLF hin jigu. Qeerroon Bilisummaa Oromoo haala qabatamaa dhugaa kana hubbatee humna Oromoo mootummaa TPLF utubee baatee jiru kana jigsuuf qabsoo hadhooftuu gochuuf irratti xiyyeefachuu qaba.Utuu humni Qeerroo Bilisummaa Oromoo warra kana irratti tarkaanfii barbaachisaa tahe kan fudhatu tahee maaliif warri diaspora bakka isaanii buuf wixxifatu?
« Lixa Oromiyaa Aanaa Guutoo Giddaa Ukkee Qarsaatti Hidhaaf Dararaan Uummataa Mootummaa Wayyaanee Akkuma Itti Fufetti Jira
Yuunibarsiitii Jimmaa Damee Kitoo Furdisaa (Technological science) Keessatti Barattoota Ambulaansiidhaan Rukutuun Ajeesanii Jirachuun Beekame »